Kubatana Kushambadzira uye KUTI-SPAM Kuteerera | Martech Zone
Ini ndinotarisa shamwari dzangu zhinji dziri mumaindasitiri dzichitamba nekukurumidza uye kusununguka nemitemo, uye ndinotya kuti rimwe zuva vachapinda munyatwa. Kusaziva hakuna chikonzero uye sezvo idzi inyaya dzekutonga, iyo faindi dzimwe nguva inodhura pane kuwedzera kuzvidzivirira zviri pamutemo. Kaviri kweakanyanya kutyorwa kwandinoona ndeaya:
Kwete kuzivisa kuti iwe une hukama hwemari nekambani - kunyangwe iwe uri muridzi, investor, kana anokurudzira akabhadharwa kusimudzira kambani kutyora pa Guides NezveKushandiswa kweZvimbiso kana Uchapupu muKushambadzira.
Spamming vanhu vane chekubatana chinopa iwe chausina chero chemberi bhizinesi hukama nacho uye kwete kupa chero nzira yekuzvinyoresa. Blogger uye vanhu vashoma vemabhizinesi vanoita kunge vanoita izvi zvishoma, vachifunga kuti chero munhu wavanosangana naye kuti vanogona kukumbira Nekudaro, ivo vanogona kunge vari kubhadhara mari yakadzika kana vasingaregi kutyora mirau. Verenga Ndeupi mutemo weCAN-SPAM?
Uye kunyangwe kana iye anotumira achiteerera paKANOGONA-SPAM, ivo vachiri kunyanya kufumura hukama hwemari neiye anotambira. Kana iwe uchiziva mumwe munhu ari kutyora chero mutemo, tumira iwo chinongedzo kuchino chinyorwa uye uvayambire kumira.
Unogona kuva yakashumwa kuFTC uye kumeso faindi inosvika kumadhora zviuru gumi neshanu kune yega email yakatumirwa!
Heano akazara infographic kubva PrivacyPolicies.com:
Tags: kushambadzaaffiliate marketinginogona kuita spamUNOGONA SPAM kutevedzeracan-spamemail spamzvibvumiranomagwara pamusoro pekushandiswa kwekubvumidzwa kana zvipupuriro mukushambadzirazvakavanzikaspamUchapupu